ဆောင်းဦးတွင် လည်ပတ်ရန်အကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခု !! - JAPO Japanese News
သော 23 Oct 2020, 11:06 မနက်
တိုကျိုမြို့ရဲ့ ခရီးသွားမဂ္ဂဇင်းဌာနတစ်ခုက ဘယ်လိုမျိုးပုံစံနဲ့ဆောင်းဦး Autumn leaves တွေကြည့်ခြင်းက စိတ်လှုပ်ရှားဖို့အကောင်းဆုံးလဲလို့ မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ၊ 71.0％ သောလူတွေက လမ်းလျှောက်ရင်းကြည့်ရတာကိုသဘောကျတယ်လို့ဖြေပြီး၊ 43.1% သောလူတွေကတော့ ရေပူစမ်းမှာရေစိမ်ရင်း ကြည့်ရတာကိုသဘောကျတယ်လို့ဖြေခဲ့ပါတယ်။
ထိုသို့ ဆောင်းဦးအရောင်ပြောင်းတဲ့အရွက်များကိုနှစ်သက်သော အသက် ၂၀ ကနေ ၅၀ အတွင်းရှိအမျိုးသားအမျိုးသမီးအယောက် ၁၀၀၀ ဆီသို့ ဆောင်းရာသီအရွက်များကြည့်ရှုလိုသောနေရာ သုံးခုစီကိုရွေးချယ်ခိုင်းရာ၊ လူကြိုက်အများဆုံးကတော့ Yamagata စီရင်စုမှာရှိတဲ့ Zao Ropeway ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအထဲမှအကောင်းဆုံးနေရာ ၁၀ ခုကတော့
1.Zao Ropeway (Yamagata Prefecture)
ကောင်းကင်ကနေ ၃၆၀ ဒီဂရီပတ်ပတ်လည် Momiji အရွက်တွေကိုကြည့်ရှုခံစားနိုင်တဲ့ Ropeway ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက် ၈၅၅ မီတာရှိသော 蔵王山麓駅 ဘူတာကနေ၊ ၁၆၆၁ မီတာအမြင့်ရှိ 地蔵山頂駅 Jizo Sancho ဘူတာအထိ မတူညီတဲ့အမြင့်ကနေ ရောင်စုံအရွက်တို့ရဲ့အလှအပကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
2. Ikaho Onsen Kawakabashi (Gunma Prefecture)
Ikaho Shrine ရဲ့အဆုံးမှာရှိတဲ့ အနီရောင်တံတားနဲ့ အနီရောင် Momiji အရွက်တို့ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုက တကယ်ကိုအံ့သြစရာကောင်းပါတယ်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၁၀ လပိုင်း ၂၇ ရက်နေ့ (အင်္ဂါနေ့) ကနေ ၁၁ လပိုင်း ၁၅ ရက်နေ့ (တနင်္ဂနွေနေ့) အထိညဘက်မီးတွေနဲ့ အလှဆင်မယ်လို့သိရပါတယ်။
3. Chusonji Temple (Iwate Prefecture)
အမျိုးသားရတနာ ၃၀၀၀ ကျော်နဲ့ အရေးကြီးသောယဥ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်တွေကို သယ်ဆောင်ပေးတဲ့ Tendai ဂိုဏ်း၏ဗိမာန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းများစွာရှိတဲ့ ကျယ်ပြန့်သောပရိဝုဏ်ထဲမှာလမ်းလျှောက်ရင်း အနီရောင်အရွက်တို့ရဲ့အလှကို ရှုမြင်ခံစားနိုင်ပါတယ်။
4. Shuzenji Onsen Katsurabashi (Shizuoka Prefecture)
Izu မြို့မှာရှိတဲ့ Shuzenji ဘုရားကျောင်းကို သက်တမ်းအကြာဆုံးရေပူစမ်းရှိတဲ့နေရာလို့လည်းသိကြပါတယ်။
Katsura တံတားကို “ Kizuna တံတား” လို့လည်းခေါ်ပါသေးတယ်။
အနီရောင်ဆေးသုတ်ထားတဲ့တံတားနဲ့ Momiji တို့ရဲ့ပေါင်းစပ်မှုက စိတ်ကူးယဥ်ဆန်လွန်းလှပါတယ်။
5. Arashiyama houseboat (Kyoto)
လှေစီးရင်း Momiji အရွက်တွေကို ကြည့်ခြင်းကလည်း မတူညီတဲ့ခံစားမှုကိုပေးပြန်တယ်။
6. Shirogane Falls (Yamagata Prefecture)
7. Nara Park (Nara Prefecture)
Todaiji , Kofukuji , Kasuga Taisha ဘုရားကျောင်းစတဲ့ ကမ္ဘ့ာအမွေအနှစ်နတ်ကွန်းတွေရှိတဲ့အပြင် ၆၆၀ ဟက်တာကျယ်ဝန်းတဲ့ ဥယျာဥ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။ သမိုင်းအဆက်ဆက်နဲ့သဘာဝတရားကြား သဟဇာတဖြစ်မှုကလည်း အလွန်လှပါတယ်။ သွားလည်ပတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ချစ်စရာသမင်လေးတွေကိုပါ တွေ့ရမှာပါ။
8. Suzaku no Niwa (Kyoto)
ဒီရေကန်ပတ်ပတ်လည်မှာ Momiji တွေအပင်ပေါင်း ၁၀၀ ရှိပါတယ်။ ညဘက်မီးထွန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ ရေကန်ရဲ့မျက်နှာပြင်ပေါ် ရောင်ပြန်ဟပ်လာတဲ့ Momiji တို့ရဲ့အလှကလည်း မိန်းမောတွေဝေသွားစေပါတယ်။
9.NOZARU Tree Adventure Nasu (Tochigi Prefecture)
သစ်တောအုပ်ထဲမှာစွန့်စွန့်စားစားနဲ့ Tree Adventure လုပ်နိုင်မယ့် ဂျပန်ရဲ့အကြီးဆုံးဝေဟင်ဆော့ကစားနိုင်မယ့်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
10. Taishaku Gorge (Hiroshima Prefecture)
အရှည် ၁၈ ကီလိုမီတာရှိတဲ့တောင်ကြားမှာ အမျိုးသားအလှအပအနေနဲ့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ Hiba-Dogo-Taishaku Quasi-National Park …
ငြိမ့်ငြိမ့်လေးသင်္ဘောစီးရင်း ဘေးနှစ်ဖက်ရှိ Momiji တွေရဲ့အလှကိုကြည့်နိုင်တဲ့အတွက် သူကလည်းလူသိများပါတယ်။
Tomisato watermelon gas tank အကြောင်းတစေ့တစောင်း
(၁၂) ရက်နေ့၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၄၅၃၅ ဦးရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၆၄ ဦးရှိ
(၁၂) ရက်နေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကူးစက်မှု ၃၀၄၁ ဦးရှိပြီး၊ သေဆုံးသူ ၂၈ ဦးရှိ
(၂၄) ရက်နေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၃၇၃၇ ဦးရှိ၊ သေဆုံးသူ ၅၃ ဦးရှိ
(၇) ရက်နေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာကူးစက်မှု ၁၅၀၆ ဦးရှိ၊ သေဆုံးသူ ၃၉ ဦးရှိ
(၂၈) ရက်နေ့၊ သေဆုံးသူ ၁၁၃ ဦးရှိပြီး၊ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၄၁၃၂ ဦးရှိ
(၁၀) ရက်နေ့ တစ်နိုင်ငံလုံးကူးစက်မှု ၂၉၆၀ ဦးရှိပြီး၊ သေဆုံးမှု ၁၆ ဦးရှိ
ညဘက်အိမ်ပြောင်းဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့ အကြောက်ဆုံးကဘာလဲ ? !!!!
ကိုရိုနာကိုအခွင့်အရေးတစ်ခုအနေနဲ့ “ မေမေ့ထမင်းဘူး” ဆိုင်လေးပြန်ဖွင့်နိုင်ခဲ့ပြီ !!!!!